အော်ရီဂွန် - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
Storage Oregon သည် Salem Oregon ရှိဈေးပေါသောသိုလှောင်မှုဘုရင်ဖြစ်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သိုလှောင်အော်ရီဂွန် တာလမ်အော်ရီဂွန်တစ်မြို့လုံးရှိမော်တော်ယာဉ်များ၊ အမြည်းများ၊ လှေများ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် Semi ကုန်တင်ယာဉ်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောစျေးအသက်သာဆုံးသိုလှောင်ရုံအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းနိမ့်ကျခြင်းအပြင် ၀ ယ်ယူသူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများကျယ်ပြန့်စွာကိုနှစ်သက်ကြသည် သိုလှောင်အော်ရီဂွန် အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
Storage Oregon Mini သိုလှောင်ရေးယူနစ် - အရည်အသွေးမြင့် - စျေးနိမ့်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
လုံခြုံမှုသည်သိုလှောင်ရုံတွင်ရှာဖွေရန်အရေးအကြီးဆုံးအရည်အချင်းဖြစ်သည်။ Heck, သင်ကသင့်အဖွားရဲ့ကျီထဲ၌လုံးလုံးလျားလျားမဟုတ်ဘဲသိုလှောင်ရေးယူနစ်အတွက်သင်ပေးရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုလုံး။ Oregon, Salem ရှိရပ်ရွာ၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွင်နေထိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာပြောနိုင်သည်။ ၎င်းမှာလုပ်စရာများများရှိရန်လုံလောက်သည်၊ သို့သော်မကြီးနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်ကမ်းခြေ၊ တောင်တန်းများနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောတောင်တက်ခြင်းနှင့်စခန်းချရာနေရာများသို့ကားမောင်းနိုင်သောအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ Oregon နှင့်အထူးသဖြင့်လမ်နေထိုင်သူများသည်သဘာဝတရားနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှထိတွေ့နေရသည်ကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်။
Hubbard Chapel ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာပွဲ - ၂၀၂၀ အလယ်ပိုင်းချိုင့်ဝှမ်းတွင်အကောင်းဆုံးရွှေရောင်အနိုင်ရ !!!
နိုဝင်ဘာလ 26, 2020 နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ငါတို့ကြေငြာရတာအရမ်းပျော်တယ် Hubbard Chapel တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင် "အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေရာ" အတွက် 2020 အလယ်အလတ်ချိုင့်၏ပထမ ဦး ဆုံးနေရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Covid-19 နှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများကြားမှကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်များကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည် Hubbard Chapel မင်္ဂလာဆောင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့် ၄ င်းတို့မိသားစုအတွက်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးများ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောဒုတိယနေရာဖြစ်သည်။ သင်တို့ရှိသမျှမပါဘဲဤအမှုကိုမပြုနိုင်ပါ
လမ်၏မြင့်မားသောလုံခြုံရေးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် Mini ကိုသိုလှောင်မှု
နိုဝင်ဘာလ 25, 2020 နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်၏တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရန်နေရာတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေသောအခါ၊ သင့်အတွက်အဘယ်အရာသည်အရေးအကြီးဆုံးလဲ။ Salem Oregon inရိယာရှိသိုလှောင်ရေးပစ္စည်းများကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်မိမိကိုယ်ကိုမေးခဲ့သောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ သိုလှောင်မှုသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဖြစ်သည်။ သင်သိုလှောင်ထားသည့်အရာသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်သည်။ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးမည့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်းကိုက်ညီမည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေချင်သည်။
Storage Oregon - အပြင်ပန်းယာဉ်သိုလှောင်မှုနှင့်အသေးစားသိုလှောင်ရေးယူနစ်များအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်း
နိုဝင်ဘာလ 4, 2020 နိုဝင်ဘာလ 3, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သိုလှောင်အော်ရီဂွန် အစဉ်အမြဲတန်ဖိုးနည်းမော်တော်ယာဉ်သိုလှောင်ရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်များအတွက်လူသိများခဲ့သည်။ ဝယ်လိုအားထက်ဝယ်လိုအားပို။ ပို။ ရှိရာလမ်ကဲ့သို့အရပျ၌, သူတို့ကိုခွဲခြား။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်သူတို့၏စျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်လိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်စျေးကွက်ကိုအမြင့်ဆုံးပမာဏဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီးတန်ဖိုးရှိသမျှကိုနို့တိုက်ကျွေးသည်။
At သိုလှောင်အော်ရီဂွန် သူတို့ကနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုလုပ်ပါ။ သူတို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလိုပဲငွေရှာဖို့လိုပါတယ်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အခြားသူများကလုပ်နေကြသောကြောင့်စျေးနှုန်းများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတိုးမြှင့်ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။
Hubbard Chapel ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာပွဲ - ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဝီလ်လမ်မင်ချိုင့်ဝှမ်း၏အကောင်းဆုံး။
အောက်တိုဘာလ 28, 2020 အောက်တိုဘာလ 27, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Hubbard, Oregon ၏ကျေးလက်ဒေသရှိ HUBBARD Chapel မှာစျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်။
WILLAMETTE ချိုင့် 2020 အနိုင်ရရှိမှုအကောင်းဆုံး !!!
ဒါ့အပြင် ..Voted အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေရာ Salem ရဲ့အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ဂျာနယ်အားဖြင့် 2019, 2018, & 2017 အဘို့ (ရွှေ)
COVID-19 ကူးစက်မှုကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်မျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနှစ်တွင်မကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်ပြီးဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ COVID-2020 အတွင်းကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ခဲ့သောဘဝသည်မိမိကိုယ်ကို၊ မိသားစုနှင့်စီးပွားရေးကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်ခန်းစာများစွာပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကပ်ရောဂါကိုကျော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏ဖြစ်ရပ်များကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုလည်း၎င်းကသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဘ ၀ များစွာကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဤအဖြစ်အပျက်သည်အထူးသဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့တက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Led Trailers Mobile Safe Gatherings အတွက် LED ဖန်သားပြင်များ
စက်တင်ဘာလ 24, 2020 စက်တင်ဘာလ 23, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
COVID-19 အသက်အရွယ်တွင်လူမှုရေးအရဝေးကွာသောလုပ်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲကွာစေခဲ့သော်လည်းအတူတကွစုရုံးခြင်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုထင်ရသည်။ ဆန္ဒပြသူများ၏မောင်းနှင်မှုသည်ဆန္ဒပြသူများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအကြားမျှတမှုကိုရှာဖွေရန် (သို့မဟုတ် ပို၍ ပင်ဆိုးဝါးသော) ဆန္ဒပြသူများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအားလုံးလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့လမ်းရှိရင်ကော။ ယခုတွင် LED, Jumbotron နှင့် streaming နည်းပညာတို့ပါ ၀ င်သည်။ သင်လုပ်မယ်ဆိုပါစို့၊ ကားရပ်နားရန်နေရာကျယ်ကြီး - ကြီးမားသည့် LED ဖန်သားပြင်နှင့်တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးနံနက် transmitter ကို။ သင်၏နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ (သို့) စပီကာများသည်ချုံ့ချဲ့ခြင်း၊ သီးခြားအခန်းမှထုတ်လွှင့်ခြင်းများကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
Mobile Stash - ငါတို့ဖုံးထားပြီလား၊ လှုပ်ရှားလား၊ အိမ်မှာလား၊ Jobsite မှာလား
စက်တင်ဘာလ 22, 2020 စက်တင်ဘာလ 22, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်ကိုယ်တိုင်“ သင်မြို့ထဲကို ၀ င်ရောက်ဖို့ကားတစ်စီးမမောင်းရရင်သိုလှောင်ရေးယူနစ်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်” ဟုသင့်ကိုယ်သင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ သင့်ရဲ့အလုပ်နေရာမှာယူနစ်တစ်ခုရှိတာကောင်းတာပေါ့၊ ဒါမှမဟုတ်အိမ်နောက်ဖေးတောင်တောင်မှဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
ကောင်းပြီ၊ သတင်းကောင်း - ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်း Stash Oregon, Salem သို့လာမည့်ကုမ္ပဏီသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာများကိုအထူးပြုသည်။
Mobile Stash - ကွန်တိန်နာတွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချခြင်း
သြဂုတ်လ 26, 2020 သြဂုတ်လ 25, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
လူတိုင်းစိတ်ထဲတွင်နံပါတ်တစ်အချက်မှာ“ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များသည်နေ့တိုင်းတံခါးပိတ်ကာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်တက်နေသည့်ဤမကြုံစဖူးသောအချိန်များကိုမည်သို့ဖြတ်သန်းနိုင်မည်နည်း” ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏ်ီများစွာရှာဖွေနေသောပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ်ခုမှာကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းများဖြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည်။
Mobile Stash - အော်ရီဂွန်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကွန်တိန်နာတင်ပို့မှု
သြဂုတ်လ 19, 2020 သြဂုတ်လ 19, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအမြဲလိုအပ်နေတယ်။ ကုမ္ပဏီများသည်ထောင့်များကိုဆက်လက်ဖြတ်တောက်သည်နှင့်အမျှသင်ကမြေအောက်ကွန်တိန်နာရွေ့လျားမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေ ၄၀ ရှည်သော Semi Truck ဖြင့်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်နှင့် forklift ဖြင့်ဆွဲယူလိုက်သည်နှင့်သင်နောက်ကျောပေါ်တက်ရန်သင်ကြိုတင်မှာကြားလိုသည်။ ဒါကသူတို့ကရိန်းတစ်ခုယူလာစရာမလိုဘူးလို့ယူဆတယ်။
သင်၏မင်္ဂလာဆောင် ၀ တ်စုံအတွက်မှန်ကန်သောပြုပြင်ခြင်းအထူးကျွမ်းကျင်သူကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 13, 2020 သြဂုတ်လ 12, 2020 Paige Walter	မှတ်ချက် Leave
သင်၏မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါသင်ရွေးချယ်သောမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှန်ကန်စွာပွေ့ဖက်ရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုကသင့်အားယုံကြည်မှုရှိစေပြီး၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ပြသနိုင်စေရန်သေချာစေရန်သင်လိုအပ်သည်။ သင်၏မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံသည်သင်၏အထူးနေ့မှရရှိသောဓာတ်ပုံများနှင့်အမှတ်တရများအားလုံးတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်အတွက်သင့်တော်သော ၀ တ်စုံကိုပြောင်းလဲရန်သင့်တော်သောလူကိုသင်ရှာရန်လိုအပ်သည်။
Coronavirus သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များစွာကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သနည်း။
သြဂုတ်လ 5, 2020 သြဂုတ်လ 4, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ - WILLAMETTE ချိုင့် 2020 အနိုင်ရ
Salem's Oregon Statesman Journal မှ 2019, 2018 နှင့် 2017 အတွက်အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပမည့်နေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
မငြိမ်သက်မှု: စုံတွဲအများစုသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲစီစဉ်ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ရှိနေသောခံစားချက်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှု။ ကမ္ဘာ့အကျပ်အတည်းကြောင့်ယနေ့လူအများအပြားမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည်မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်သာမဟုတ်နှစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြရသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 31, 2020 ဇူလိုင်လ 30, 2020 RD	မှတ်ချက် Leave
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ရှာလင်မြို့တော်က၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်များကိုသူတို့မပေးနိုင်တာကို ၀ န်ဆောင်ခအတွက်အခကြေးငွေယူနေပြီးအချို့သောစွပ်စွဲချက်များသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ လမ်စီးတီးသည်၎င်းတို့ပေးသော“ အထွေထွေ ၀ န်ဆောင်မှုများ” အတွက်အခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ City City သည်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထို ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သာပေးရသည်။ ၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူအခကြေးငွေများနှင့်ပိုတူသည်။
Portland ခေါင်းဆောင်များသည် Covid-19 ပြန့်ပွားမှုကိုအဓိကရုဏ်းများသိထားကြသော်လည်းမည်သို့မျှမလုပ်ဆောင်ကြပါ - အဓိကရုဏ်း၊ လုယက်ခြင်းနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများဆက်လက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 18, 2020 ဇူလိုင်လ 17, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
Oregon သည် COVID ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ Los Angeles မြို့တော်ဝန် Eric Garcetti သည်သူ၏မြို့တော်တွင်ဆန္ဒပြမှုများကိုဝန်ခံသည် ကိုပြု coronavirus ဖြစ်ပွားမှုအတွက်ဆူးဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြသူယခင်ကအခိုင်အမာအဘယ်သူမျှမ link ကိုရှိခဲ့သည်။ LA ကောင်တီကျန်းမာရေးအရာရှိများကမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောဆန္ဒပြမှုများသည် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကိုသိသိသာသာမြင့်တက်စေသည်ဟု Garcetti ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
Mobile Stash - Lookout အော်ရီဂွန်၊
ဇူလိုင်လ 15, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်အခြားတိုင်းပြည်နှင့်ကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်ရှိသည့်အခါတိုင်းအမြဲတမ်းအပေးအယူများရှိသည်။ တချို့ကကောင်းတယ်၊ တချို့ကဆိုးတယ်၊ တချို့ကသင်သူတို့လုပ်တာပေါ်မူတည်ပြီးလမ်းတစ်လမ်းစီလျှောက်သွားနိုင်တယ်။ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းနှင့်မနီးမဝေးတွင်တည်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်လေးလံသောသံမဏိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည့် Portland သို့ပို့ဆောင်ခံရသည်။
LED Trailers - နောက်နှစ် Oregon ပြပွဲနှင့်ပွဲများအတွက်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းမရှိခဲ့ပါ
ဟေးလူတိုင်း! ဒီနေ့ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းနည်းနည်းလောက်ပြောချင်ပါတယ် LED Trailers, နှင့်သင့်ကိုကူညီရန်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲ၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများလာမည့် ၂၀၂၁ မျှတသောရာသီအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
ဝမ်းနည်းစရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံအားပျံ့နှံ့နေသော coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ပွဲတော်များနှင့်ပွဲတော်များအားလုံးနီးပါးပိတ်သွားရုံသာမကထောင်ပေါင်းများစွာသောဖျော်ဖြေရေးသမားများ၊ အစားအစာနှင့်အရက်ပေးသွင်းသူများနှင့်အငှားကုမ္ပဏီများသည်အချိန်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးများစွာသောသူများသည်ပြောင်းလဲခြင်းမှထွက်ခွာနေကြသည်။ ကောင်းသောအဘို့စက်မှုလုပ်ငန်း။
MOBILE STASH - လွယ်ကူစွာရွေ့လျားအောင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောမြေပြင်ကွန်တိန်နာ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 29, 2020 ဇြန္လ 28, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
မိုဘိုင်းသိုလှောင်မှုအတွက်သိုလှောင်ခြင်း / သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာကိုရွှေ့ခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော Oregon, Mobile Stash ဟုခေါ်သော Oregon တွင်လမ်၌မကြာမီတံခါးဖွင့်နေသည့်ချစ်စရာကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပြောလိုပါသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်းမြေအောက်ကွန်တိန်နာအမျိုးမျိုးနှင့်အခြားရွေ့လျားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးမျိုးကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ဇြန္လ 22, 2020 ဇြန္လ 22, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
... ကိုလည်းမဲပေးကြသည် အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေရာ Oregon's မှ 2019, 2018, & 2017 အတွက် (ရွှေ) အတွက် လမ် Statesman ဂျာနယ်.
ဝီလမ်မင်ချိုင့်ဝှမ်း၏အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့သည်လမ်မြို့သည်ဤအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက်ဆုရရှိသူနှစ် ဦး နှင့်အတူအမျိုးအစားများစွာကိုကြေငြာသောနေ့ဖြစ်သည်။ မြင်ရတာအံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ Hubbard Chapel ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ နောက်တဖန်မင်္ဂလာဆောင်နေရာဌာနခွဲအတွက်ဆုရရှိသူနှစ်ခုထဲကတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း, ထိပ်တန်းသတ်မှတ်မင်္ဂလာဆောင်နေရာအဖြစ်ပြန်လည်ခဲ့သည်။
Oregon သိုလှောင်ရေး Salem - သင်သင်ခံထိုက်သောအရာ
ဇြန္လ 11, 2020 ဇြန္လ 10, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသောစီးပွားရေးလောကတွင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရသည်။ ဤသည်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်မှန်သည် သိုလှောင်အော်ရီဂွန် လမ်ထဲကအခြေခံပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်ကသိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏသည်သိုလှောင်မှုပမာဏထက်များစွာပိုနေပြီးလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့လျက်ရှိသောပြည်နယ်ပါလီမန်အဆောက်အအုံတွင်ပိုမိုနိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သိုလှောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားစေရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သိုလှောင်အော်ရီဂွန် စီးပွားရေးအတွက်ဖောက်သည်များအဆင်ပြေချောမွေ့စွာချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပြင်းထန်သောလှိုင်းလုံးအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Storage Oregon Salem နှင့် Keizer Oregon တို့အတွက်အမှုဆောင်ခြင်းသည်ဂုဏ်ယူသည်
ဇြန္လ 6, 2020 ဇြန္လ 5, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Storage Oregon သည်ဒေသခံမိသားစုမှပိုင်ဆိုင်ပြီးယခုတွင်သူ၏မျိုးဆက် ၅ ခုသည်အော်ရီဂွန်တွင်နေထိုင်သည်။ သူတို့သည်မိမိတို့၏ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်သောအော်ရီဂွန်လူမျိုးများကိုဂုဏ်ယူကြသည်။
ရှာလမ်မြို့သည်အပန်းဖြေယာဉ်များနှင့်အပန်းဖြေသူများအတွက်ကားရပ်နားရန်အတွက်စည်းကမ်းချက်များကိုပြောင်းလဲနေကြောင်းနှင့်ဒေသခံမြို့သူမြို့သားများအနေဖြင့်အခြားနေရာများကိုရှာဖွေရန်ဖိအားပေးနေသည်ကိုသူတို့သိရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသိပ်ပြီးမကျွမ်းကျင်တဲ့မြေတချို့ကိုဝယ်ပြီးစတင်ခဲ့တယ် သိုလှောင်အော်ရီဂွန် မြို့တော်သည်၎င်း၏နိုင်ငံသားများအားလုံးအတွက်လိုအပ်သောအနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် RV ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာတစ်ခုကိုပေးအပ်ရန်စိတ်ကူးဖြင့်ဖြစ်သည်။
Trump စစ်တပ်များချထားရန်ခြိမ်းခြောက်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနေဖြင့်အတိုက်အခံလက်ခံရရှိ
ဇြန္လ 2, 2020 ဇြန္လ 2, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
သမတ Donald Trump ဂျော့ခ်ျဖလိုဒ်သေဆုံးမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများတွင်ဆန္ဒပြသူများကိုပြင်းထန်သောအရေးယူမှုများပြုလုပ်မည်မဟုတ်သည့်ပြည်နယ်များသို့စစ်တပ်ကိုတပ်ဖြန့်မည်ဟုသူကသတိပေးခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကလည်းသမ္မတကဆန္ဒပြသူများကို ဖမ်းဆီး၍ ဖမ်းဆီးရန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
Storage Oregon - အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ကားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ နောက်တွဲယာဉ်များနှင့်လှေများသိုလှောင်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခု!
ဇြန္လ 1, 2020 မေလ 30, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ထဲမှာ လမ် / Keizer အော်ရီဂွန် စျေးကွက်၊ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့သိုလှောင်မှုကိုတတ်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းတက်ကြွလာတဲ့နာမည်တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ အဲဒါ Storage Oregon ပါ။ ၎င်း၏အပြင်ဘက်တွင်မော်တော်ယာဉ်နှင့် RV သိုလှောင်မှုကြောင့်လူသိများသောသူတို့သည်မကြာသေးမီကမိုးလုံလေလုံသိုလှောင်မှုနေရာများသို့တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးအော်ရီဂွန်တစ်ခွင်မှဖောက်သည်များကိုလက်ခံနေကြသည်။
LED Trailers များမှပိတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ Fair အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ
မေလ 27, 2020 မေလ 26, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
coronavirus တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေရန်သန်းနှင့်ချီသောအမိုးအကာအဖြစ်အမေရိကရှိယခုအချိန်တွင်မကြုံစဖူးစိုးရိမ်စရာအချိန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အန္တရာယ်အနည်းဆုံးဖြစ်ရန်လူများစွာ၏အစိတ်အပိုင်းထက်များစွာကောင်းမွန်သည်။
Stem Salem Oregon - ပိုမိုနိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်
Oregon, Salem မှာသိုလှောင်မှုအတွက် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားပြtheနာအကြောင်းကိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ အလုပ်များနှင့်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးသိုလှောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Storage Oregon နှင့် ပတ်သတ်၍ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုသည်။ Salem ရှိသိုလှောင်ရေးကုမ္ပဏီအများအပြားတွင်လက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းများသည်အမြင့်ဆုံးသို့တက်ခဲ့သည်။
Oregon ရှိ Coronavirus အလယ်တွင်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲစီစဉ်ခြင်း
မေလ 13, 2020 မေလ 12, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
မဲဆန္ဒ အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေရာ Salem ရဲ့အားဖြင့် 2019, 2018, & 2017 အဘို့ (ရွှေ) အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ဂျာနယ်
ဒီကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့နောက်ဆုံးမှာနှေးကွေးနေပုံရသဖြင့်သတို့သမီးများစွာနှင့်သူတို့၏အိမ်သူအိမ်သားများက“ငါတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုစီစဉ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီလား။ ” ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကြီးမားသောနေ့အဘို့မိမိတို့အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ရန်ဖြစ်စေမဖြစ်စေအနာဂတ်သတို့သမီးနှင့်သတို့သားအများအပြားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ခြင်း Oregon တန်ဖိုးနည်းသိုလှောင်မှု Salem တွင်သိုမဟုတ်သိုလှောင်မှု ၁၀ ​​ခုပါ
မေလ 2, 2020 မေလ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
အချိန်ကောင်းကခက်ခဲတယ်၊ လူတိုင်းကသူတို့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချပြီးလျှော့ချဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာသင်၏သိုလှောင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာသည့်စက်ရုံအသစ်သို့ပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
Sလမ်အော်ရီဂွန် torage RV Storage, Traditional Onsite Mini Storage နှင့်မကြာမီရရှိနိုင်မည့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် ကွန်တိန်နာသိုလှောင်ခြင်း၊ ကွန်တိန်နာကို Mobile Stash ဖြင့်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း.
အဘယ်အရာကသင်၏မင်္ဂလာဆောင်အတွက် Professional Landscape Photographer ဖြစ်စေသနည်း။
ဧပြီလ 25, 2020 ဧပြီလ 24, 2020 အမ်မလီ Browne	မှတ်ချက် Leave
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအနက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်ထိုအထူးနေ့၏အမှတ်တရများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီ၏ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုလိုအပ်သည်။a၏အကူအညီဖြင့်သင်လိုချင်သောအကောင်းဆုံးရိုက်ချက်များကိုသင်ရနိုင်သည် ရှုခင်းဓာတ်ပုံဆရာ။ မှန်ကန်သောကိရိယာများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အရည်အသွေးများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာသည်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်ရက်မှလှပသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြနိုင်သည်။
Oregon ရှိ COVID အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းမင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 16, 2020 ဧပြီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
မဲဆန္ဒ အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေရာ Salem ရဲ့အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ဂျာနယ်အားဖြင့် 2019, 2018, & 2017 အဘို့ (ရွှေ) ။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းကမ္ဘာအနှံ့တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သောပါတီပွဲများစွာကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အနာဂတ်မင်္ဂလာပွဲများအတွက်အစီအစဉ်စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့၏အတွေးများကထိုစုံတွဲ၏မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့ကိုရေတွက်ရန်မဟုတ်ပါ။ Coronavirus အတွေးကအနာဂတ်မင်္ဂလာပွဲကဲ့သို့သောအနာဂတ်အစီအစဉ်များနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုစိတ်ပျက်အားလျော့စေသည်။
သင်၏ ၂၀၂၀ မင်္ဂလာပွဲအတွက်ဆက်လက်အစီအစဉ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ္ဘာကြီးဆီသို့ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်လျှင်ပင်ပြန်လည်ကျန်းမာစေနိုင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 31, 2020 မတ်လ 30, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကူးစက်ရောဂါ coronavirus သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိလူများအားတစ်နည်းနည်းဖြင့်ထိခိုက်သည်။ စုံတွဲများကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်မင်္ဂလာပွဲများကိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ စုံတွဲတိုင်းသည်ဤရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းသူတို့၏မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့အတွက်အဖြေမရှိသောမေးခွန်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ရှေ့တွင်အဘယ်အရာဖြစ်မည်ကိုမည်သူမျှမသိရှိပါ၊ သို့မဟုတ်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဗိုင်းရပ်စ်သည်မည်မျှကြာအောင်အချိန်ကိုပေးမည်နည်း၊ သင်သည်သင်၏မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်ရမှန်းခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သိုလှောင်လမ် / Keizer ဒါမှမဟုတ်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိတ်ချရသော၊
မတ်လ 21, 2020 မတ်လ 20, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်တစ်လွှားရှိကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည်သူတို့၏တံခါးများကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လုံခြုံသောလူမှုရေးဝေးကွာခြင်းကိုလေ့ကျင့်နေကြသည်။ အချို့သူများအတွက်မူအိမ်မှအလုပ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်၊ အခြားသူများက obb ည့်ခန်းများပိတ်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအစီအမံများပြုလုပ်နေခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သော်လည်းအချို့အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
ဖောက်သည်ကိုပထမနေရာထားခြင်း၏ကုမ္ပဏီတန်ဖိုးများနှင့်အညီ သိုလှောင်လမ် / Keizer ဒါမှမဟုတ်. ၎င်း၏တံခါးများပွင့်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းကြေညာရန်ကျေနပ်မိသည်။ သူတို့သည်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုမှကာကွယ်ရန်အပိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်နေစဉ် Storage Oregon သည်မဖြစ်မနေအလိုအလျောက်ငွေပေးချေခြင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူအများမိမိတို့၏နေရပ်သို့ လာရောက်၍ သူတို့၏ငွေတောင်းခံလွှာကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဂရုစိုက်ရန်မလိုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဟာအလိုအလျောက်ပြုလို့ပါပဲ။
၂၀၂၀ အတွက်မင်္ဂလာဆောင်အစီအစဉ်များ - ယခုမင်္ဂလာဆောင်ရာသီစတင်တော့မည့်အချိန် - အော်ရီဂွန်တွင်သင်၏မင်္ဂလာပွဲကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးနေရာသည်အဘယ်မှာနည်း။
မတ်လ 11, 2020 မတ်လ 11, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်၏မင်္ဂလာဆောင်မည့်နေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့အတွက်သင်၏စီစဉ်ရေးဆွဲစဉ်အတွင်းသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည့်အကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောမင်္ဂလာဆောင်ပွဲများအတွက်ထိုနေ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အမြင့်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်နောက်လိုက်မယ့်အခြားဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချခင်သင့်ရဲ့နေရာနဲ့တည်နေရာကိုဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအဓိကနေရာမှာပါဝင်ပါတယ်။ အခြားရွေးချယ်မှုများထက်ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသောရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ အကြီးမားဆုံးတစ်ခုမှာသင်၏နေရာဖြစ်သည်။
Storage Salem / Keizer Oregon သည်သူတို့၏တန်ဖိုးနည်း Salem Oregon တည်နေရာတွင် Move-in အထူးအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
မတ်လ 7, 2020 မတ်လ 6, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကိုယ်ပိုင်သိမ်းဆည်းခြင်း လမ် / Keizer အော်ရီဂွန် Storage Oregon ၏သိုလှောင်မှုအသစ်များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အလွန်နိမ့်သောကုန်ကျစရိတ်စျေးနှုန်းနှင့်ပါဝင်သည်သာယာအဆင်ပြေမှုများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ သိုလှောင်လမ် / Keizer OR မြို့အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအဖြစ်သူ့ဟာသူများအတွက်နာမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ သို့သော်သတင်းကောင်းသည် ပို၍ ပင်ကောင်းမွန်လာသည်။ သင်မတ်လတွင်ပြောင်းရွှေ့သောအခါသင်သည်ပထမလကိုအနည်းဆုံး ၆ လစာချုပ်ဖြင့်အခမဲ့ရရှိမည်။ အရင်တုန်းကအဲဒီလငါးခုကိုကြိုတင်ပြီးပေးခဲ့ရတယ်၊ အခုတော့သူကတစ် ဦး ကိုအခမဲ့ရတယ်။ ဒုတိယလအတွက်ပေးချေပြီးပထမလသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Oregon Stemem - လူအစုအဝေးအထက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသောဤခွေးစားသောခွေးစီးပွားရေးလောကတွင်သင်သည်ကွဲပြားခြားနားစွာလုပ်ဆောင်နေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်တွေ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူပိုမိုမှန်ကန်သည် သိုလှောင်လမ်အော်ရီဂွန်။ လွန်ခဲ့သောကိုးနှစ်က Oregon, Salem and Keizer တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်၊ သိုလှောင်ရန်လိုအပ်ချက်များသည်သိုလှောင်ရန်လိုအပ်ချက်ထက်များနေသည်။ သိုလှောင်အော်ရီဂွန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို၎င်း၏ထူးခြားတဲ့နှင့်ဖောက်သည်ဖော်ရွေချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူဇောက်ထိုးစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလှည့်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၀ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနေ့ကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ကျင်းပရမည်နည်း။ ဤတွင်အော်ရီဂွန်ရှိသင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်စိတ်ထဲရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဂုဏ်ယူပါတယ်! သင်စေ့စပ်ထားပါသလား ယခုတွင်သင့်လက်ချောင်းပေါ်တွင်စေ့စပ်လက်စွပ်တစ်ခုရှိနေပြီးသင်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်နေခဲ့သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့အခမ်းအနားကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ကျင်းပရမည်နည်း။ ဤမေးခွန်းသည်သင်၏အတွေးထဲတွင်ယခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမချင်းမိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကသင့်အားဤမေးခွန်းကိုမေးလိမ့်မည်။ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ ပျမ်းမျှစုံတွဲသည်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့မတိုင်မီတစ်နှစ်စေ့စပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Valentine သည် Oregon တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်သင်၏ချစ်သူအားအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်းရန်အချိန်ကောင်းလား။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
စုံတွဲများစွာအတွက် Valentine Day သည်ပန်းများ၊ ညစာနှင့်ချောကလက်များကဲ့သို့သောဖန်စီပစ္စည်းများဖြင့်အထင်ကြီးရန်ကြိုးစားမည့်အစားချစ်သူနှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ သင်တစ်နှစ်တာ၏အချစ်ဆုံးအချစ်ဆုံးနေ့၌သင်၏အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းအားအဆိုပြုရန်စဉ်းစားနေပါကသင်နှစ် ဦး စလုံးဘယ်တော့မျှမေ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဇန်နဝါရီလ 31, 2020 ဇန်နဝါရီလ 30, 2020 Austin W	မှတ်ချက် Leave
အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံးကိုနေရာတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်အတော်လေးခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်အချိန်အကန့်အသတ်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အချိန်ကုန်စေနိုင်သည်။ သင်မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေသင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားစွာစီစဉ်ထားရန်သင်အမြဲဆန္ဒရှိလိမ့်မည်။ သင်ရွေ့လျားဖို့ကြောက်စရာမလိုပါ။ ရွေ့လျားမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Stem Salem Oregon သည်တိုးချဲ့နေသည် !!!
ဇန်နဝါရီလ 30, 2020 ဇန်နဝါရီလ 29, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဟုတ်တယ်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏စာရင်းထဲသို့ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုသူတို့၏လုံခြုံစိတ်ချရသောသိုလှောင်မှုတွင်ဖွင့်ပေးသည်။ သူတို့၏ယူနစ်အသစ်များကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုသည်။ အသစ်ဖွင့်လှစ်သောယူနစ်အသစ်များမှာ5X 8's၊ 10 X 8's 20X8's များသွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစားပင်ဖြစ်သည်။ အသစ်ကယူနစ်သို့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ အသစ်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်။ Storage Oregon တွင်သူတို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီတိုးတက်အောင်အမြဲတမ်းတိုးတက်လိမ့်မည်ဟုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှစ်သစ်ကူးနေ့၌အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်တို့၏နေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ခြင်း
ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များအတွက်အရေးပါသောရက်စွဲများကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဒါဟာသင်လက်ထပ်ခဲ့သည်တစ်နှစ်အဖြစ် 2020 2020 ကိုသတိရဖို့တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်။ နောင်အနာဂတ်တွင်“ ငါ ၂၀၂၀ မှာငါလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ” လို့မင်းပြောရင်ကောင်းမှာပဲ။
သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါ ၂၀၂၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်၎င်းတို့အတွက်ကောင်းမွန်သောစည်းချက်ရှိသည်။ အခုဆုံးဖြတ်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့နေ့စွဲမတိုင်ခင်သင်အကြိုက်ဆုံးနေရာကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၂၀၂၀ ဒီနှစ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောရက်စွဲများမရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ထိုရက်စွဲကိုအထက်ပါရက်များကဲ့သို့ရှာဖွေ။ မကြာမီစာရင်းသွင်းရန်သတိရပါ။
ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Bend, Oregon သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ကြီးစွာသော ဦး တည်ရာအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း၏အပြင်ဘက်ကစားကွင်းကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး Bend သည်သဘာဝနိူးသူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုဆွဲဆောင်သည်။ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆို microbrewery အများဆုံးရှိသောနေရာတွင်လူသိများသောကြောင့်လူများသည်အဘယ်ကြောင့်ကွေးရန်စုပြုံနေသည်နှင့် Deschutes ကောင်တီရှိအခြားနေရာများတွင်ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဤတွင်အတွက် လမ်, အော်ရီဂွန်သိုလှောင်မှု ၀ ယ်လိုအားထက်ကျော်လွန်ပြီး ၀ ယ်လိုအားထက်ပိုပြီးဘယ်အချိန်တက်လာသလဲဆိုတာသိဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ များစွာသောဒေသခံသိုလှောင်ရေးအဆောက်အအုံများသည်၎င်းကိုနှလုံးသားထဲသို့ရောက်စေပုံရသည် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်အစားမည်သူသည်မည်သူအားကောက်ခံနိုင်သည်ကိုသိရန်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်နှင့်နေဆဲကျိုးကြောင်းဆီလျော်အပြည့်အဝနေဖို့။ ဤအရာသည်စီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သူတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်သူတို့၏ဈေးနှုန်းများကိုအတုအယောင်တိုးမြှင့်ပေးပြီးကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။
Salem ရဲ့ Storage Oregon ကထပ်လုပ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
လမ်ရဲ့သိုလှောင်အော်ရီဂွန် Oregon Salem မြို့တွင်ပြင်ပ RV၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ လှေနှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်သိုလှောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့အဖြစ်လူသိများသည်။ သူတို့ကထောက်ပံ့ပေးအတွက်အထူးပြု နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာ Salem / Keizer အတွက်အကောင်းဆုံးသိုလှောင်မှုတန်ဖိုးနှင့်ထိုသို့ပြုနေတဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုဖန်ဆင်းပါပြီ။ အကြောင်းကိုကြီးမြတ်သောအရာတစျခု လမ်ရဲ့သိုလှောင်အော်ရီဂွန် သူတို့ကကားပါကင်နေရာတစ်ခုထက်ပိုပြီးကမ်းလှမ်းတာပါပဲ။ စျေးနှုန်းတွင်ပါဝင်သည် 10 ယှဉ်ပြိုင်မှုလုပ်သောအခမဲ့သာယာအဆင်ပြေမှုများ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ပြီးသားတန်ဖိုးနည်းလစဉ်စျေးနှုန်းများတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
Spokane Washington သို့မိုဘိုင်းတန်ဖိုးမြင့် LED မျက်နှာပြင်ကြီးသောနည်းပညာကိုဈေးနည်းစွာဖြင့်ယူဆောင်လာသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2019 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဝါရှင်တန် Spokane နေထိုင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အနောက်အာဖရိကအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကိုလူသိများသောလူများသည်၎င်းထံစုရုံးရောက်ရှိလာကြပြီး၎င်းသည်နေထိုင်ရန်ထိပ်တန်း 41 နေရာနံပါတ်များဖြစ်သည်။ အခုတော့မိုဘိုင်းနှင့်အတူအစဉ်အဆက်ထက်သာ။ ကြီးမြတ်နိုင်ပါတယ် LED ငှားရမ်းခရရှိနိုင်ပါသည် မည်သည့်ဒေသခံပြပွဲ, ပွဲတော်များ, ဖျော်ဖြေပွဲ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပါတီများအဘို့။
အော်ရီဂွန်တွင်အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ - Affordable Dream မင်္ဂလာဆောင်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
မဲဆန္ဒ အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေရာ Salem ရဲ့အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ဂျာနယ်အားဖြင့် 2019, 2018, & 2017 အဘို့ (ရွှေ)
စျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင် အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာပွဲနေရာအတွက်သုံးနှစ်တာရွှေတံဆိပ်ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏သမိုင်းဝင်ရှေ့ဆောင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ၁၈၉၂ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒီ ၁၂၇ နှစ်အရွယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ကြည်လင်သောညနေခင်းများ၌ Hubbard Chapel, Affordable Dream မင်္ဂလာဆောင်များတွင်ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သောခေါင်းလောင်းသံမြည်သံကိုသင်ကြားနိုင်သည်။ ချာ့ချ်များဆောက်လုပ်ပြီးကတည်းကအိမ်ထောင်သည်အသစ်ကိုကြေညာရန်အစဉ်အလာရှိသည်။
စျေးသက်သာသောမင်္ဂလာဆောင် - Oregon နေရာတွင်အထူးထိတွေ့မှုအချို့ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းများ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ယနေ့သင်၌အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်သည် တတ်နိုင်မင်္ဂလာဆောင်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာပြီးဆုံးသည့်အချိန်အားဖြင့်စျေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာဆောင်သို့လှည့်တက်အဆုံးသတ်သည့်အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ သင်သည်အခြေခံအတွေးအခေါ်များမှစတင်သည်၊ သို့သော်သင်၏အတွေးအခေါ်များသည်စီမံကိန်းအဆင့်တွင်ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှသင်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုမေ့သွားသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ မင်းပန်းတိုင်ကနေစပြီးအာရုံစူးစိုက်နေသရွေ့အဆုံးရလဒ်ကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ အခုသတိရပါ ... ဒီနေ့ကမင်းရဲ့နေ့ရက်ပဲ။ မင်းကနှစ်ပေါင်းများစွာသတိရနေစေချင်တယ်။
Gordon Sondland အမျိုးသမီးသုံး ဦး အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခြင်း
နိုဝင်ဘာလ 28, 2019 နိုဝင်ဘာလ 28, 2019 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမျိုးသမီးသုံး ဦး လူသိရှင်ကြားထွက်လာကြပါပြီ ယူအက်စ်သံအမတ်ကြီးကိုစွပ်စွဲ သူတို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှု၏ Gordon Sondland ။ မကြာသေးမီရက်များအတွင်းက Mr. Sondland သည်ယူကရိန်းကိစ္စတွင်ဖြစ်နိုင်သောအဓိကသက်သေအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ၏စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။
စျေးသက်သာသောလမ် / ကီဇာစက်ရုံရှိ Woodburn အော်ရီဂွန်နေထိုင်သူများအတွက်သိုလှောင်ခြင်း
နိုဝင်ဘာလ 23, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Woodburn ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သိုလှောင်မှုတစ်ခု (သို့) အပြင်ဘက်နောက်တွဲယာဉ်နှင့် RV သိုလှောင်မှုတစ်ခုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအဆောက်အအုံများရှိသည်၊ သိုလှောင်ရေးယူနစ်များမှာရောင်းလိုအားနည်းပြီးစျေးနှုန်းများတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည်။ မိသားစုများတိုးများလာပြီးမြို့တော်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသိုလှောင်ရေးကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များထံမှပိုမို ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချလာကြသည်။
Salem / Keizer Oregon တွင်သိုလှောင်ခြင်း - အော်ရီဂွန်သိုလှောင်ခြင်းသည်ဒေသတွင်းဈေးနှုန်းချိုသာသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်
နိုဝင်ဘာလ 8, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Oregon Storage သည်လမ်နေထိုင်သူများအကြားတွင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကလူသိများခဲ့သည် Salem Oregon ရှိဈေးအသက်သာဆုံးနောက်တွဲယာဉ်၊ RV နှင့် Semi Truck ကားသိုလှောင်မှု။ ၎င်း၏အပြင် စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူများသည် Storage Oregon မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများအမျိုးမျိုးကိုနှစ်သက်ကြသည် အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှာ။
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ရှိအလွန်တတ်နိုင်သောဘတ်ဂျက်ဖြင့်အကောင်းဆုံးရှေ့ဆောင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနှင့် Re ည့်ခံပွဲကိုရယူပါ
နိုဝင်ဘာလ 6, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကြောင်းနေရာရှာရန် မင်းရဲ့အိတ်ကပ်စာအုပ်ကိုနှစ်သက်ပါတယ် နှင့်သင်၏အိပ်မက်အနာဂတ်မင်္ဂလာဆောင် - ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာရှာရန်ခက်ခဲသည်။ ရှာဖွေသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အဓိကအချက်များရှိပါသည် အကောင်းဆုံးနေရာ ပြီးတော့သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုဘာတွေထည့်သွင်းဖို့ကြံစည်တယ်ဆိုတာကသင့်ရဲ့ကြာမြင့်စွာစောင့်စားခဲ့ရတဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်အဲဒါကိုတတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်နိုင်မနိုင်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ရှိ Great Pioneer Chapel မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားအတွက်ဂီတရွေးချယ်ခြင်း
အောက်တိုဘာလ 23, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအခမ်းအနား၏တေးဂီတသည်သင်ရွေးချယ်မည့်နေရာ၌လူများဝင်လာသည်နှင့်သင်၏မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ရပ်၏အစကိုအစကတည်းကသတ်မှတ်သည်။ ယခုအချိန်သည်သင်၏ဖိတ်ကြားထားသည့် guests ည့်သည်များအားသင်၏အထူးနေ့သည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းပထမအကြိမ်ထင်မြင်စေရန်ဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သောသီချင်းများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့ကစားသည်ဆိုပါကသင်၏မင်္ဂလာပွဲ၏ ၀ န်းကျင်နှင့်ပုံစံကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
အော်ရီဂွန်၌သင်၏အခမ်းအနားနှင့် and ည့်ခံခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေရာ
အောက်တိုဘာလ 17, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
မင်္ဂလာဆောင်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်အများစုသည်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုလားကာကို ၀ တ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်။ သို့သော်သင်မရှောင်နိုင်သည့်အရာတစ်ခု - နေရာတစ်ခု! ပြီးနောက်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုဝင်များစုရုံးကျင်းပနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုရရှိရမည်။ သင်၏မင်္ဂလာပွဲ၏အခမ်းအနားသည်အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ထိုပွဲသည်မည်သည့်နေရာတွင်ကျင်းပမည်ကိုသင်၏နေ့ရက်အသေးစိတ်ကိုစီစဉ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာသည်သင်ဘယ်တော့မျှမေ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ နောက် 50 နှစ်ကိုပြန်ကြည့်ပါ.
တွေ့ရှိချက် ပြီးပြည့်စုံသောနေရာ မလွယ်ဘူး ကျေးလက်ဒေသဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှကြော့ရှင်းသောဟိုတယ်တစ်ခုသို့ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သင်၏အိပ်မက်နေရာကိုရှာဖွေရန်ကူညီရန်အကြံပေးချက်အချို့ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်။ မဲပေး: အလယ်အလတ်ချိုင့်မင်္ဂလာဆောင်ရွှေတံဆိပ်ဆု3နှစ်တစ်တန်း။ http://affordabledreamwedding.com
သင်၏ကြီးသောနေ့ကြီးအတွက်သင်ရွေးချယ်မည့်နေရာသည်သာမာန်ကမ်းခြေတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြည်လင်သော Ballroom တစ်ခုကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေသင်၏ပွဲအတွက်သေချာသောအရာသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်နှင့်သင့်တော်မည့်နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဆောင်ပုဒ်သည်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်ကိုနေရာနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိစေလိမ့်မည်။ သတို့သမီးအနေနှင့်သင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် သင်သည်သင်၏အိပ်မက်မိတ်ဖက်နှင့်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်မည်ဘယ်မှာအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်။ အတိတ်ကဗျာဒိတ်ရူပါရုံတွေရှိခဲ့ရင်ကောင်းပြီ၊ အခုတော့ကြိုးစားဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ နေရာမှန်ကိုရှာပါ။ သင်၏မင်္ဂလာပွဲ၏အခြေခံများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည်နေရာများစွာသို့ကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းရောက်သွားစေပြီးသင့်အတွက်မှန်ကန်သောအရာကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။
နှင်းဆီပွင့်ချပ်များဖုံးလွှမ်းထားသောချာ့ချ်၏အတန်းကိုသင်၏အဘွားလက်ထပ်ထားသည့်အခြေအနေနှင့်ဆင်တူသည်ကိုသင်အိပ်မက်မက်သလော။ ရိုးရာလက်ထပ်မင်္ဂလာချာ့ချ် / ချာ့ချ်သည်အထူးစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးနှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ပြန်သွားသည့်မင်္ဂလာပွဲများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုထင်ဟပ်ပြသည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာမဟုတ်သောနေရာများသည်ယနေ့လူကြိုက်များလာသည်။ သို့သော်ဤမင်္ဂလာဆောင်မျိုးများသည်စပျစ်ဥယျာဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကမ်းခြေရှိနေရာတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်စျေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
3) စုံတွဲနှင့်အတူလာကြသောသင်၏ list ည့်သည်စာရင်းနံပါတ်ကဘာလဲ။
သင်ဖိတ်ကြားထားသည့်လူအရေအတွက်သည်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့၌အမှန်တကယ်တက်ရောက်မည့်သူအရေအတွက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာသင်ဟာသင့်ရဲ့ invite နဲ့အတူ RSVP မှတ်စုတစ်ခုပို့ပြီးသင် guest ည့်သည်ကပြန်ပို့ဖို့အချိန်ယူရတယ်။ သင်၏ကြိုးစား guests ည့်သည်စာရင်းကိုအမြဲတမ်းချရေးပါ။ မင်းရဲ့ caterers တွေကို real number ကိုပေးဖို့လိုတယ်။ ဤသည်ကစျေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်၌ပန်းကန်ပြားများကအားပေးသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိလျှင်။ သင် order ည့်သည်ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ၊ မပြသည်မှာသင်မှာထားသည့်ပန်းကန်တိုင်းအတွက်သင်ပေးချေလိမ့်မည်။ စျေးကြီး !!
ဒါကမင်းရဲ့နေရာကိုမရွေးခင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့အစောပိုင်းထဲကတစ်ခုပါ။ ဘယ်သူ့ကိုတက်ရောက်မလဲ။ ခိုင်မာသောနံပါတ်များရှိခြင်းနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းသည်သင့်အားခေါင်းကိုက်ခြင်းများစွာကိုသက်သာစေသည်။ သင်၏ of ည့်သည်အရေအတွက်ကိုသိရှိခြင်းသည်သင့်အားကူညီလိမ့်မည် သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ဖြိုဖျက်အချို့ကုန်ကျစရိတ်များသည်သင်ဖိတ်ကြားသောလူ ဦး ရေအပေါ်များစွာမူတည်သည်။
သင်၏မင်္ဂလာဆောင်များ၊ စုပေါင်းပွဲများ၊ အသုဘများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဝင်ပေါက်ထဲသို့ဝင်သောအခါ၊ သင်နှင့်သင့်ပါတီသည်ဘ ၀ ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အခါမြင့်မားသောစောင့်ရှောက်မှုခံရလိမ့်မည်။ http://affordabledreamwedding.com
သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့ကိုစတင်စီစဉ်သည့် အချိန်မှစ၍ မင်္ဂလာဆောင်ကိုယ်တိုင်၏နေ့အထိ၊ သင်၏ဘတ်ဂျက်တွင်သာနေပါ။ ဒါဟာလုပ်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းသည်နှင့်လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးဖို့လွယ်ကူသည်။ ဤအရာသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိပါကသင်၏ဖိစီးမှုများကိုအဆုံးတိုင်အောင်အံ့သြလောက်အောင်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ သင်၏နေရာကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုရေထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်လျှင်သင်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည် သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့် extras ပြန်ချိန်ခွင်, ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးတတ်နိုင်နေရာများကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အချို့နေရာများသည်လက်တွေ့မကျပါ။ ထို့ကြောင့်အလွန်သတိထားပါ။ သင်ရောက်ရှိသည့်အခါ၎င်းသည်သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းကိုသင်မြင်လျှင်သင်သွားရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဤသည်အလွန်ဘုံအမှားဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်သိမ်းဆည်းထားရန်လိုသည်။ သင်၏နေရာ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်သိရှိပြီးသည်နှင့်သင်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည် သင့်ရဲ့အစားအစာနှင့်ပုံစံမျိုးစီစဉ်၏နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကိုယူပြီး။ သငျသညျလညျးလညျးပျားရည်ဆမ်းခရီးအတွက်ဘတ်ဂျက်ရှိသည်ဖို့သတိရပါ။
5) စဉ်းစားပါ အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့နေရာ၏ကုန်ကျစရိတ်တွင်ပါဝင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောနေရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရောင်းချသူနှင့်အလှဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်နေရာများကိုသင်ကြည့်သောအခါ၊ အရာအားလုံးကိုထွက်စျေးနှုန်းသေချာပါစေ။ စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံများ၊ ပိတ်ချောများပါ ၀ င်သည့်နေရာသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငှားရမ်းမည့်နေရာထက်ကြိုတင်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္မဏီတစ်ခုမှငှားရမ်းခ၏စျေးနှုန်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်မည်ကိုကြည့်ရန်သင့်သည်။ မင်းအတွက်အရာရာ
နေရာတွင်ငှားရမ်းရန်အခြေခံပစ္စည်းများ (အဖြူရောင်ပိတ်ချော၊ ပုံမှန်ပြားများ၊ စားသောက်ခန်းများ၊ စားပွဲခုံများနှင့်စတုဂံကျောက်ပြားများ) ရှိနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ သို့သော်သင်၏အမြင်နှင့်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများကိုငှားရမ်းရန်သင်ပိုမိုပေးဆပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည် အကယ်၍ ထိုပစ္စည်းများကိုသူတို့နေရာတွင်ငှားရန်နေရာရှိသောနေရာကိုသင်တွေ့ရှိပါကသင်၏စိတ်ဖိစီးမှုအချို့ကိုသက်သာစေပြီးတန်ဖိုးနည်းသောကြောင့်ယင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သည့်အဖြစ်အပျက်အတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ 1892 မူရင်း Affordable Dream မင်္ဂလာဆောင် Chapel နှင့်ပွဲခန်းမ၌သင်၏အခမ်းအနားကိုကျင်းပပါ။ http://affordabledreamwedding.com
မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပရာနေရာကိုဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းသည်ဆိုလိုသည် မင်းရဲ့နေ့ကြီးအတွက်တရားဝင်“ ရက်စွဲကိုသတ်မှတ်” ပြီးပြီ။ သင့်တွင်မင်္ဂလာဆောင်သည့်ရက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးသားဖြစ်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ရက်စွဲကိုယူပါကသင်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနိုင်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပမည့်နေရာရွေးချယ်ရာတွင် ဦး ဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုမှာသင်အတွက်အလုပ်လုပ်မည့်သင်သိသောရက်အနည်းငယ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လာမည့်နွေရာသီတွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်ဟုဆိုသော်လည်းကောင်းသောနေရာများသို့မစတင်ခင်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာသင်၏အထူးနေ့အတွက်ရက်စွဲအနည်းငယ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပရာနေရာများစွာကိုတစ်နှစ်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်နေရာတစ်ခုနှင့်တစ်နေရာတည်း၌ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်လျှင်၊ ကြီးမြတ်သို့မဟုတ်အထူးခံစားမှု။ သို့သော်သင်၏ကန ဦး ခရီးစဉ်တွင်အစက်အပြောက်များပေါ်တွင်လက်မှတ်ထိုးရန်ဖိအားများလွန်းခြင်းမရှိကြပါနှင့်။ နောက်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းပြီးနေရာအနည်းငယ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးသင်၏အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မိသားစုနှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သွားခဲ့သောနေရာများအားလုံး၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုစဉ်းစားပြီးသင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ။ နေရာတိုင်းတွင်အကောင်းအဆိုးများရှိသည်။
သင်နှင့်သင်၏အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင်ဆန္ဒရှိသည့်နေရာကိုသဘောတူပြီးသည့်အခါစာချုပ်ချုပ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ကိစ္စအများစုတွင်သင်ရက်စွဲကိုသိမ်းဆည်းရန်နေရာတွင်ငွေတစ်ဝက်ပေးရပြီးထိုအပိုသည်ပြန်အမ်းရန်မလိုပါ။ အဆိုပါ“ nonrefundable” ဟူသောစကားလုံးများသည်နည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကျင်းပမည့်နေရာနှင့်ပွဲအတွက်သင်၏ရက်စွဲကိုသင် ၁၀၀% စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန်သေချာစေပါ။
ယခုတွင်သင်သည်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင်ဆုံးဖြတ်ရမည့်အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချပြီးပြီ။ ဒီအောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုရန်အချိန်ယူသင့်သည်။ နေရာနှင့်နေ့စွဲကိုသင်ရွေးလိုက်သည်။
Oregon, Hubbard ရှိ Affordable Dream မင်္ဂလာဆောင် / Hubbard Chapel အလွန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် သင့်ရဲ့အဘို့ Oregon တွင်မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပမည့်အခမ်းအနားနှင့် Re ည့်ခံပွဲ။
ဤနေရာသည်သင်၏အခမ်းအနားအတွက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်အတူသင့် with ည့်ခံပွဲအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးသည်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့အတွက်အိမ်တစ်လုံးအောက်တွင်ရှိသည်။ သင်၏အခမ်းအနားနှင့် reception ည့်ခံပွဲအတွက်သင့်တော်သောနေရာကိုရွေးချယ်ရန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် စျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင် / Hubbard Chapel။ ဤနေရာသည်သင်မြင်ရမည့်နေရာဖြစ်ပြီးသင်၏အထူးနေ့အတွက်သင်မြင်ယောင်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုလားဆိုတာသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင် / Hubbard Chapel သည် 127 နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ရှေ့ဆောင်မင်္ဂလာဆောင် Chapelအခမ်းအနားနှင့် reception ည့်ခံမည့်နေရာနှစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်နေရာသည်သင်၏အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းတွင်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ဖြစ်ခဲ့တယ် အော်ရီဂွန်3နှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်သည့်နေရာကိုမဲပေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများမှာ သင်ကတခြားနေရာများမှကျွန်တော်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအလွန်တတ်နိုင် သောလက်ပံနှင့်လမ်အိမ်နီးချင်းဒေသများတွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ခရီးစဉ်အတွက်လာကြသောစုံတွဲများသည်အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများကိုမယုံနိုင်အောင်ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုကြသည်။
at Carrie မှခရီးစဉ်အတွက်ခေါ်ဆိုပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ စျေးနှုန်းချိုသာသောမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင် / Hubbard Chapel ဤသည်သင်၏သင်၏မင်္ဂလာဆောင်နေရာအတွက်သင်၏အိပ်မက်အစက်အပြောက်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်။